DFS oo sheegtay in ay dishay Xubno katirsan Al-Shabaab. -
DFS ayaa sheegtay in howlgal qorsheysan oo ka dhacay inta u dhaxeysa Degmooyinka Balcad & Afgooye oo ka kala tirsan Gobollada Shabeelaha Hoose & Shabeelaha dhexe ku dishay xubno katirsan Al-Shabaab.
Warka Dowladda ayaa lagu sheegay in howlgalkaas ay fuliyeen Ciidamada gaarka ah u tababaran ee DANAB lagu dilay 6-ruux oo uu ku jiro Madaxa Maaliyadda Al-Shabaab ee Gobollada Shabeelooyinka oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdalla (Abuu Ayman).
Isla howlgalka inta uu socday waxa ay DFS sheegtay in Askarta ay burburiyeen goobo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab, isla markaana ay ku qaadi jireen lacagaha, halka waddooyinka ay kasoo saareen Miinooyin.
Ciidamada Dowladda ayaa xoojiyay howlgalada qorsheysan oo ay ka wadaan deegaannada u dhaxeeya Degmooyinka Balcad & Afgooye oo Dowlad Goboleed ahaan kala hoostaga Hir-Shabeelle & Koofur Galbeed.
Horaantii bishaan, Saraakiisha Ciidanka DANAB ayaa sameeyay howlgal ka dhacay deegaan u dhaw Tuulada Basro, Dowladda ayaa sheegtay in ay qarxisay Gaari nuuca xamuulka qaada ah oo lagu soo raray Qaraxyo.
Al-Shabaab kama aysan hadlin dhankooda, Dhaq-dhaqaaqyo ciidan ayaa ka socda Deegaannada u dhaxeeya Degmooyinka Afgooye & Balcad, labada DG ee Hir-Shabeelle & Koofur Galbeed ayaa qiray in Shabaab xooggooda ay isugu tageen deegaannada u dhaxeeya labada Shabeelle.
Isha: SONNA / Axadle.